Baba naAmai Domingo
Zvimwe zvizvara zveZimbabwe zviri muAmerica kuNew York, amai na baba Bernard Domingo vanoti vakabatwa nenyaya yakabuda paStudio7 yematambudziko arikutarisana namuzvare Anna Lungisani vari kurarama nehutachiwona hweHIV/AIDS kuEpworth zvekuti vakabva zvaronga kuvabatsira.
Amai Anna Lungisani Vari Kumba Kwavo KuEpworth
Amai Veronica Domingo vanoti pavakanzwa kutambura kuri kuita amai Lungisani vakasvimha misodzi zvakaita kuti ivo nemurume wavo baba Bernard Domingo vabvise mari yekutenga magumbeze ekufuga, chikafu nemari yekufambisa kuenda kunorapwa.
Mutori wenhau Safari Njema akaita nyaya iyi panhepfenyuro yedu yeStudio7 muchikamu chinotarisa vakaremara izvo zvakabata baba naamai Domingo pavaiterera.
“Nyaya iyi yakandibata moyo sezvo ndakanzwa kuti pane munin’ina waamai Lungisani ano enda kuchikoro anombovabatsira asi parizvino ari kuremerwa sezvo ari kuyedza kuita zvedzidzo, uye baba vamuzvare Anna vachihora mari shoma inotadza kukwana mhuri yese,” Amai Domingo vaudza Studio7.
Amai Domingo vanoti vakashushikana nekunzwa kuti amai Lungisani vari kushaya zvekudya zvakakwana, magumbeze ekufuga panguva apo nyika yakatarisana nechando chirikuuya mwedzi uno uya uye mari ye kuenda kunorapwa izvo zvakaita kuti vade kubatsira.
Baba Domingo vanoti ivo nemudzimai wavo havana mabasa epamusoro sezvo ivo vari kuita bhizinesi rekucheka huswa mudzimai wavo achienda kuchikoro uko ari kudzidzira kuita mukoti.
“Kunyangwe zvedu tisina mabasa epamusoro takangoti rega tibatanidze kamari kadiki kekutenga zvinhu zvishoma zvekubatsira amai Anna Lungisani,” Baba Domingo vaudza Studio7.
Amai Lungisani vanogara nababa vavo muEpworth avo vanobastirwa nemunin'ina wa amai ava wechidiki kana asiri kuchikoro.
Amai Domingo vanoti izvi zvakavabata zvikurusa sezvo ivo vane vane vadiki uye vachiziva kukosha kwakaita dzidzo zvakaita kuti vade kubatsira mhuri iyi pepadiki vavanokwanisa.
Mhuri yekwa Domingo inoti ichataura nevamwe vavanopinda navo svondo kuti vawone kuti vangawedzere here rubatsiro rwavari kupa mhuri iyi.
Hurukuro NaAmai Veronica NaBaba Bernard Domingo